Home News Xiisad u dhaxeeysa Al-shabaab iyo Dadka deegaanka oo Galgaduud ka taagan
Xiisad u dhaxeeysa Al-shabaab iyo Dadka deegaanka oo Galgaduud ka taagan
Xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada maamulka Galmudug iyo Al Shabaab ayaa ka taagan deegaano hoosta degmada Guriceel ee gobolka Galgadiuud.
Sida dadka deegaanka ay saxaafadda u sheegeen waxaa saaka deegaanada Goole Goole iyo Dhagaxyaale ka taagan xiisad dagaal oo u dhaxeysa Al Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug.
Arinta ayaa ka dambeysay kadib dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada maamulka Galmudug iyo Al Shabaab, gelinkii dambe ee shalay waxaana Al Shabaab ay bilaabeen inay dib isku soo abaabulaan.
Ciidamada Galmudug ayaa dagaal saacado qaatay kadib waxay la wareegeen deegaanadii lagu dagaalamay, waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay jiraan qasaaro xoogan oo labada dhinac kala gaaray.
Saraakiisha ciidamada Galmudug ayaa sheegay in ciidamadooda ay isku balaarin doonaan deegaanada hoostaga degmada Guriceel oo Al Shabaab ay ku sugan yihiin.
Previous articleMasuuliyiinta Gobolka gedo oo diiday amar kasoo baxay Xafiiska Axmed Madoobe
Next articleDhalinyaro Soomaaliyeed oo lasoo taagay Maxkamad ku taal Bristol
Turkish company to manage Port of Mogadishu